Wakaalada Wararka Warqaad – Ra’iisalwasaaraha Yahuuda oo diiday ka qeyb galka Aaska Mandela SABAB
12/09 10:13 am0 commentsViews: 1428
R/wasaaraha maamulka Yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa go’aan ku gaaray inuusan ka qeyb galin xuska loo samee doono halgamaagii reer Koofur afrika ee Nelson Mandela sababo la xiriira qarashka ku baxaya safarka oo aad ubadan mudada uu halkaasi joogayo.
Warbaahinta Yahuuda ayaa baahiyay warar sheegaya in R/wasaaruhu uu dhabiilay lacagta ku baxaysa sidaa daraadeedna uu ka baaqsaday safarkii uu halkaa ku aadi lahaa.
Labo Milyan oo ah dollarka Mareykanka ayaa la sheegay inay gaareyso lacagta ku baxaysa gaadiidka cir iyo dhul uu ku isticmaalayo iyo shaqaalaha dhinaca amaanka qaabilsan ee safarka ku wehlin doono.
Idaacad ku hadasha codka maamulka Yahuuda ayaa si deg deg ah u baahisay warkaasi oo si lama filaan ah u dhacay.
Nentanyaahu ayaa la tilmaamay inuu yahay hogaamiye tamashleyn badan laakiin iska dhig shakhsi wax dhaqaaeyn badan.
23,000 oo dollar ayaa la sheegay inay ku baxdo biyaha laga isticmaalo barkadaha dabaasha ee ku yaala dhismaha uu dagan yahay.
Shacabka Yahuuda ayaa ku jira dadka ugu dhabiiltanka badan caalamka , taa waxaa dheer inay maareeyaan goobo ganacsi oo aad u horumarsan marka laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha.
Ganacsato Yahuud ah ayaa iska leh milkiyada goobaha ganacsi ee ugu horumarsan dalka Koofur afrika.
Waxaa lagu xantaa inay si dadban gacanta ugu hayaan ganacsiga dalkaas.
Madax ka socota in ka badan 50 dal ayaa ka qeyb gali doona xuska sagootinta ah ee loo sameyn doona Nelson Mandela.
M/Weynaha Mareykanka Baraak Xuseen Obaama iyo xaaska ayaa wadaa inay tagaan dalka South afrika , ayadoo lagu wado in 80,000 oo qof ayaa sidoo kale ka qeyb gali doona xuskaasi.
Tooshka WarqaadWararkii ugu dambeeyay ee aqalka madaxtooyada iyo RW cusub. Axmed Fiqi oo erayo adag u adeegsaday ururka Damu Jadiid TOP: Daawo dowladda Federal-ka oo saxiixday buugga tacsida Mandela XOG: Kay oo talefoonka ku gudbiyay xaaladda dalka ay mareyso Hees cajiib ah oo loo qaaday RW Saacid, Madaxweynaha lagu caayay Video: Hooyo Somaliyed oo uur sagaal bilood leh oo la kufsaday lana Ceyjiyey Guul – Afka Soomaaliga oo lagu daray afafka Google Translate uu turjumo. Arimaha BulshadaWararkii ugu dambeeyay ee aqalka madaxtooyada iyo RW cusub. TOP: Daawo dowladda Federal-ka oo saxiixday buugga tacsida Mandela Hees cajiib ah oo loo qaaday RW Saacid, Madaxweynaha lagu caayay Gabdhaha isticmaala Facebooka oo la sheegay in abateetka ka xirmo Dhageyso “Jeesow oo ka hadlay halka uu marayo maamulka G.Hiiraan” DAAWO: Faroole oo si aanan caadi ahayn loogu soo dhoweeyay Garoowe Dhageyso Pro: Afyare oo ka hadlay khilaafka madaxda dalka & arrimo kale. DHAGEYSO: Sarkaal jooga Garbahaarey oo ka warramay dagaalkii shalay DAAWO: Xuska maalinta Qowmiyadaha Itoobiya oo si weyn loo xusay! Tufaaxa iyo xanjadda oo la sheegay inay ilkaha cadeeyaan visitor activity monitoring
MaqaaloSideed ku Cafin Laheyd Saaxiibtaa ama Saaxiibkaa Qalad kaa Galay? Somaliya Shilinkaa Sharciga Ka Weyn!!!+Faallo Soomaaliya ma soomaali baa leh misa Zamankiyo wuxuu sido? Wasaarada horumarinta & A/Bulshada : Hogaanka Wasaaradaha Soomaaliya. Dilalka Madaxda Al Shabaab yaa ka dambeeya? Culeys dhig ee mid kale Qaad waa cilad heysata dowlada Soomaaliya. Puntland kana siib kana saar ( Riwaayad taxane ah Qaybtii 1-aad ) Madaxweyne Xasan oo hadal qiiro leh U Sheegey Shacabka Jubooyinka Fanaanad Soomaaliyeed oo ka Tilaab satay Dhaqankena Wanagsan + Sawiro Halkee Ku Tababarteen Kooxdii ka danbeeysay Weerarkii Westgate Sheeko gaaban oo Shakiga iyo isku dirka Soomaalida ka hadleysa UNICEF oo barnaamij wada sheekeysi ah u furtay gabdho Soomaaliyeed oo da’yar Madaxweynaha oo Diraya Hambalyo ku Aadan 59 guuradii ka soo Wareegatay Calan Soomaaliyeed #22306 (no title)Nagala Soo Xariirtaleex banaabaxgacan iyo lug go’andhalinmuuqaalSoomaalilayaabka baaluunkaDaawo Muuqaalka xayawaan dagaalamaya iyo kumanaan dad ah oo daawanayaAxmed MadoobeGaafowQARAXDaawo Video : Hodan C/raxman oo Qurbo joogta Muqdisho hees cajiib ah ku ceebeysay!!!Shaaribaha iyo BakistankufsikubadTarsanSaado-CaliFAYSAL-WARAABE-DHEGAYSOBEEGSIGASh UmulProf ToganeCali Maxamed GeedifoolkaanomudaaharaadthanksgivingXasuuqBAARLAMAANKAgooltuugAbu MuscabmuuqaalGUBASHOMuuqaal: Qarixii maanta ee halakeeyay BoosaasogabarMandellarugcadaa dagaalUMALmuuqaalMusharax Muuse Sh Cumarma dhabaa?BeebayaalbaraaticMUUQAAL